MUUQAAL: Faysal Waraabe oo ku baaqay in la joojiyo Itoobiya Airline iyo Arimaha uu ka hadlay [Daawo] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Faysal Waraabe oo ku baaqay in la joojiyo Itoobiya Airline iyo Arimaha uu ka hadlay [Daawo]
Mar 24, 2020 - 2 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Gudoomiyaha Xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeisa, ayaa ku baaqay in la Joojiyo Duulimaadka Shirkadda Itoobiyan Airlines, Lana Xidho Xadka itoobiya.
Faysal ayaa sheegay in Somaliland aysan Awood u lahayn inay Xakamayso ama wax ka Qabato Caabuqa Corona, Balse laga doonayo dedaal, Wuxuuna xusay in dhibaatada ka dhalan karta Qaadka iyo Duulimaad ka yimaada dhinaca Itoobiya.
“Waa Cudur Xun oo aad moodo, Yowmol Qiyaamihii oo Ifka la inoogu keenay, ALle ha inaga Qabto, Dhinaca Caafimaadku waa meelaha aynu ugu Liidano, Waa Hay’adaha aan Koron 30-Sanno oo Baylah ah, Cudurkaas waad aragtaa kuwii awooda sheegtay halka uu gaadhsiiyey, Laakiin dedaal ayaa la inaga rabaa”
“Maanta Aafooyinka inooga imaanaya ee Qaadka iyo Xashiishadu ay kamid yihiin, haduu kan inoogu darsamo, Waa Hooga reer Somaliland alle ha inaga Xijaabee “ Ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Faysal Dhurwaa waa nin jecel inuu warbaahinta ka muuqdo hadh iyo habeen.
Qaadka iyo xashiishka uu sheegahayo marka safmarka tago malaha wuu oggol yahay inuu Hawadaay Itoobiya ka keeno oo lagu halaago gobollada woqooyi maadaama wiilka Addis Ababa uga dhow yahay Iidoorka siduu sheegay midka Muqdisho ku dhashay.
Faysal Ina Ali waraabe intii aan maqlaayey hadaladiisa waa markii ugu horaysay oo malaha caqliga caafimaadka qabaa ku soo maaxay.
Waa runtii Soomaalind iyo Soomaali kale toona awood uma laha ay ku maareeyn karaan cudurkan Eebbe uu naga badbaadiya mooyee.
Qaadka waa hoyga iyo isu gudbinta ugu fudud ee ay Soomaaliya ku rogmaneyso. Dowladihii ugu quwada iyo Tamara ku faani jiray baa maanta albaabadii kala xidhan oo aan Dalna Dal kale u gudbay xag Cir iyo xag dhultooba, hadana uuna galay madaxdoodii.
Soomaali waa in caqliga shaqeeyo, Alle Weynaye ha inaga hayee Ummaddiisana ha ka dul qaadee haduu soo galo Soomaalia xaalku sidaa ahaan maaye hala iska xakameeyo in goori goor tahay.